Samsung Galaxy S10 + နှင့်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ရိုက်ရမည်နည်း Androidsis
Galaxy S13 + ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်လှည့်ကွက် ၁၃ ခု
Manuel Ramirez | | Samsung, Android cheat
အဘို့အလှည့်ကွက်၏ဤစီးရီး Galaxy S10 + ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်သင်သည်ဖျော်ရည်အားလုံးကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် မင်းမှာမင်းဖုန်းရှိလို့ဒီအားလပ်ရက်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သူစိမ်းတွေကိုအံ့အားသင့်စေတာက
ပိုပြီးသဘာဝဓါတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုယူမလဲ၊ အရာဝတ္ထုကိုခြေရာခံရန် autofocus ကိုသုံးသည် ဒါမှမဟုတ်ထောင့်အကျယ်နဲ့ရိုက်ကူးနိူင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြုပြင်ပါ၊ ဒီအခမ်းအနားအတွက်ဗွီဒီယိုမှာပြထားတဲ့ 'tips' တွေပါ။
1 4:3တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ
2 Galaxy S10 + နှင့်ပိုမိုသဘာဝကျသည့်ဓာတ်ပုံများ
3 အလိုအလျောက် mode ကိုအဘို့: မြင်ကွင်းတစ်ခု optimizer
5 အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး အပေါ် autofocus
6 ည mode
7 သင်၏ Galaxy S10 + ဖြင့်ပိုကောင်းသောပုံတူရိုက်ပါ
9 ပိုပြီးရှင်းလင်းတဲ့သဘာဝ selfie
10 selfies အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသုံးပါ
4:3တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ
En Galaxy S10 အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ ဤကြီးမားသောဖုန်းပေါ်မှဓာတ်ပုံများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုသင်ပြပြီးပြီဖြစ်သည်။ ၄း၃ တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၆: ၉၊ တကယ်တော့ ၄: ၃ မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲ, ဒါကြောင့်သင်မှန်ဘီလူး၏ resolution ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ချင်လျှင်, 4:3၌သူတို့ကိုယူပါ။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Galaxy S10 + နှင့်ပိုမိုသဘာဝကျသည့်ဓာတ်ပုံများ
အလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံများအတွက်မြင်ကွင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကင်မရာအက်ပ်၏အကြီးမားဆုံးသောကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် မပျောက်ပါနဲ့ S10 + တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများရိုက်ကူးရန်ဤလှည့်ကွက်များ။ ဒါပေမယ့်လိုချင်ရင် ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားရန်အကြံပြုသည့်ပိုမိုသဘာဝကျသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ပါ မြင်ကွင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏မျက်နှာ၏မစုံလင်မှုများအားလုံးနှင့်အတူ၎င်းကို“ အကြမ်း” အဖြစ်မည်သို့ယူရမည်နည်း၊ သို့သော်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက် mode ကိုအဘို့: မြင်ကွင်းတစ်ခု optimizer
သင်၏ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေလိုခြင်းမရှိလျှင်၊ သင်ရိုက်ကူးခဲ့သောတစ်ခုချင်းစီ၏ဓာတ်ပုံ၏အချို့သောရှုထောင့်များကိုပြုပြင်ရန်အတွက်မြင်ကွင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်သူကိုဆွဲယူထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ညအချိန်တွင်ရောက်ရှိနေပါက၎င်းသည်ညဘက်စနစ်ကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မြို့ပြမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါကထပ်တူပြုလိမ့်မည် ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးများသတ်မှတ်ပေးမည့်ပိုမိုအထူးရိုက်ချက်များအတွက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံများကိုအကောင်းဆုံးဘောင်ချခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ပါက Galaxy S10 + တွင်မြင်ကွင်းအကြံပြုချက်များကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ တကယ်လုပ်တာကဘာလဲ ကျနော်တို့ frame ကိုရွှေ့ဖို့ရှိသည်ညွှန်ပြလိမ့်မည်ဟုဘား ကျနော်တို့လက်ျာဘက်ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအဝါရောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးရန်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးဖမ်းမိမှုဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေကိုပြချင်တဲ့ဘောလုံးအားကစားရုံကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒုတိယ option ကို activate လုပ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းမှုအကြံပြုချက်များ.
အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး အပေါ် autofocus
ကျွန်ုပ်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်မည့်အချိန်တွင်ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမဆုံးရှုံးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးကိုပန်းခြံထဲဖြတ်လျှောက်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ပြီးတော့မင်းသူ့ဓာတ်ပုံတွေဆက်တိုက်ရိုက်ချင်တယ်။
ကြည့်ရှုသူကို နှိပ်၍ ကလေးငယ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာနှိပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည် အော်တိုအာရုံစိုက် mode ကို.
updateပြီလနောက်ဆုံးအခြေအနေ မှစ၍ ညဘက် mode သည် Galaxy S10 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်တာလဲ မေလ မှစတင်၍ ရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံအရည်အသွေးသည်တိုးတက်လာခဲ့သည် gcam သို့မဟုတ် Huawei နှင့်လိုက်ဖက်သောဤ mode နှင့်အတူ။ ဒီ mode အောက်မှာတောင်မှအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အလင်းအခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီပါကဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတံခါးပိတ်နေရာများသို့မဟုတ်ညတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှောင်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည် အလင်းပိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရမယ် နှင့်ပြတ်သားမှု။
သင်၏ Galaxy S10 + ဖြင့်ပိုကောင်းသောပုံတူရိုက်ပါ
Galaxy S10 + တွင် dynamic focus mode သည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် telephoto lens ကိုဤ mode တွင်အသုံးပြုပါက အဆိုပါပုံတူဘယ်တော့မှအရင်ကကဲ့သို့ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ငါတို့ဖုန်းနှင့်အတူ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင်ဒီဖုန်းဟာတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်မေလနောက်ဆုံးအဆင့်သို့အဆင့်မြှင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Galaxy S10 + ၏ pro mode သို့အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလိုပါကအဖွင့်နှစ်ခုအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငါတို့မှာရှိတယ် တလက်ပေါ်မှာ,f/ 1.5 နှင့်f/ 2.4။ မှန်ဘီလူးမှတဆင့်အလင်းပိုမိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်အပါရမီသည်။ ဓာတ်ပုံကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုလျှင်f/ 1.5 ကိုသုံးပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာအလင်းပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်ပြီးမှန်ဘီလူးမှတဆင့်အလင်းပိုမိုဝင်ရောက်လာလိမ့်မည်။
ဖုန်း၏ pro mode ရွေးချယ်မှု၏ဒုတိယခလုတ်တွင်သင်ရွေးစရာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားလိုလျှင်f/ 2.4 aperture ကိုသုံးပါ။
ရယူသည် သဘာဝအရ selfies ပိုမိုပြုလုပ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှအပအသုံးအနှုန်းကိုပိတ်ထားရမည် ရှေ့ကင်မရာမှာ -
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြည့်ရှုမည်ပုံဖြစ်ပါသည် မစုံလင်မှုနှင့်ဓာတ်ပုံသည် ပို၍ သဘာဝကျလိမ့်မည်, အလှအပ mode ကိုပိုပြီး "ပလပ်စတစ်" အောင်အားဖြင့်ငါတို့မျက်နှာကိုအောင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကတည်းက။
selfie ရှိဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယို mode အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Dynamic Focus ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကနှိပ်နှင့် ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့ Modes လေးမျိုးရှိတယ် လယ်ပြင်မှုန်ဝါးသည်။ နောက်ခံမှုန်ဝါးနေသည့်အရာမှလည်ပတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်သည်၊ နောက်တစ်ခု၏အမြန်နှုန်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အမြင်သာဆုံးအရောင်ကိုရွေးချယ်သောနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Galaxy S10 ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေသည့်လှည့်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Instagram mode ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့လျှင် app ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည့်ပုံမှန် mode သို့ပြန်သွားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအစား၎င်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ချင်သည့်အခါ Instagram mode သို့ပြန်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့အားအဆင့်အနည်းငယ်သက်သာစေသည်။
Y ကျနော်တို့«နောက်ဆုံး mode ကိုအသုံးပြုပါ».
အပြီးသတ်ဖို့ခလုတ်တစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုသို့ရွှေ့မည် ကျွန်တော်တို့ကိုတ ဦး တည်းလက်နှင့်မိုဘိုင်းကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုပါ ဒါ့အပြင်လက်မနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးချိန်မှာကင်မရာကိုရွှေ့လို့မရပါဘူး။
ငါတို့ထိန်းသိမ်းထားတယ် shutter-release ခလုတ်ကိုကြာကြာနှိပ်ရမည် ပြီးတော့အဲဒါကို site ကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်။
Galaxy S13 + ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်လှည့်ကွက် ၁၃ ခု ဒီဟာကဒီဖုန်းပြီးပြီထက်စာရင်ပိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပိုခံစားနိုင်မှာပါ။ မလွဲစေနဲ့ ဘယ်လို Galaxy ကြိုးမဲ့အားသွင်းရန် သို့မဟုတ်အဖြစ် သင်၏ပထမဆုံး Bixby လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဖန်တီးပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android cheat » Galaxy S13 + ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ရန်လှည့်ကွက် ၁၃ ခု
Harry Potter: Wizards Unite သည်၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့တွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်